Turkiga Oo Maxkamad Kusoo Oogay Kooxdii Dishay Suxufigii Caanka ahaa ee Jamaal Khaashuqji | Foore News
Home Warar Turkiga Oo Maxkamad Kusoo Oogay Kooxdii Dishay Suxufigii Caanka ahaa ee Jamaal...
Ankara (Foore)- Labaatan qof oo u dhalatay waddanka Sucuudi Carabiya ayaa iyagoo maqan waxaa Turkigu uu u maxkamadaynayaa dilka weriye Jamaal Khaashuqji kaas oo dhacay 2018.
Khaasuqji oo ahaa nin caan ah oo dhaleecayn jiray Amiirka dhaxalsugaha ah Maxamed bin Salmaan, ayaa waxaa qunsuliyadda boqortooyada ay ku leedahay magaalada Istanbul ku dhex dilay koox Sucuudiga u dhalatay.
Dadka dacwadda lagu soo oogay waxaa ka mid ah laba nin oo hore ula talin jiray Amiirka, kuwaas oo gaashaanka u daruuray inay arrintaasi wax lug ah ku leeyihiin.
Sucuudi Carabiya ayaa waxa ay diidday codsi uu Turkiga ku dalbaday in raggaasi ay u soo gacangeliso, waxa ayna sanadkii la soo dhaafay siddeed qof u xukuntay dilkaasi.
Shan ayaa waxaa lagu xukumay dil ay ku mutaysteen gacantii tooska aheyd ee ay dilka weriyaha ku lahaayeen, halka saddexda kale madaxa loo galiyay xabsi ay iyana ku mutaysteen inay dambigaasi qariyeen.
Maxkamadaynta Sucuudiga ayaa waxaa gaashaanka u daruurtay Agnes Callamard oo ah haweeneyda ay Qaramada Midoobay u saartay dilka Khaashuqji, taas oo sheegtay in Khaashuqji “si ulakac ah loo dilay oo weliba dilkiisu uu ahaa mid la sii qorsheeyay” oo uu mas’uul ka ahaa qaranka Sucuudiga.
Sidey wax uga dhaceen maxkamadda?
Khaashuqji gabadhii u doonanayd ee Turkiga u dhalatay, Hatice Cengiz, ayaa loo ogolaaday inay ka qeybgasho dhageysiga dacwadda.
Markii dambe ayaa waxa ay weriyayaasha ku sugnaa afaafka hore ee maxkamadda u sheegtay in sida ay wax u socdeen ay dareenkeeda kicisay.
Hatice Cengiz oo u doonanayd Khaashuqji ee u dhalatay waddanka Turkiga ayaa weriyayaasha u sheegtay: “Waxaannu ku talsoonnahay cadaaladda Turkiga.”
Ms Cengiz ayaa waxa ay sheegtay inay ku kalsoon tahay hannaanka cadaaladda ee Turkiga waxa ayna ku dhawaaqday: “Baadigoobkeennii cadaaladda waxa uu ka sii socon doonaa waddanka Turkiga iyo meelkasta oo aynu awoodno.”
Ms Callamard, oo sidoo kale ku sugnayd maxkamadda, ayaa sheegtay: “Maynaan gayn dilka Jamaal Khaashuqji dhageysi caadi ah oo bulshada caalamku ay aqoonsan karto, sababtoo ah maxkamadaynta Sucuudi Carabiya laguma kalsoonaan karo oo sharciyad malaha.”
“Halkan markii ugu horraysay, bilowgiiba waxaa soo baxday inay jiraan rag badan oo wax ka maleegay dambiga,” ayey ku dartay.
Dadka eedaysan waa kuwama?
Wakaaladda wararka Anadolu ee uu leeyahay qaranka Turkiga ayaa waxa ay soo xigatay hadal ay dacwad oogayaasha dalkaasi jeediyeen oo ay ku eedeeyeen Sacuud al-Qaxdaani, oo hore lataliye sare ugu ahaan jiray Amiirka dhaxalsugaha ah Maxamed, iyo Axmed Asiiri, kuxigeenkii hore ee sirdoonka Sucuudiga, inay “soo maleegeen dilkaasi waxshinimada ahaa”.
Sideed iyo tobanka kale ayaa waxaa lagu eedeeyay inay fuliyeen “dilkaasi qorshaysnaa muhiimadduna ay aheyd inay baabi’iyaan waxkasta oo caddayn ah”.
Sacuud al-Qaxdaani (Bidix) iyo Axmed al-Asiiri (Midig) waxa lataliyayaal sare u ahaayeen Amiirka dhaxalsugaha ah ee Sucuudiga ee Maxamed bin Salmaan
Sideedda qof ee Sucuudigu uu u xukumay dilka Khaashuqji ayaanay mas’uuliyiinta Sucuudigu weligood shaacin haybtooda.
Dacwad oogayaasha Sucuudi Carabiya ayaa sheegay in Mr Asiiri in la maxkamadeeyay balse la fasaxay kaddib markii la waayay wax caddayn ah, halka Sacuud al-Qaxdaani la baaray hasayeeshee aanan la maxkamadayn.
Wiilka Khaashuqji Saalax, oo ku nool gudaha Sucuudiga, ayaa sheegay bishii May in isaga iyo walaalihii “ay cafinayaan dadkii dilay aabihii, oo ay ajar ka sugayaan Allaah Subxaanahu watacaalaa”. Arrintaas oo cafis buuxdo u fidisay raggaas marka la fiiriyo sharciga Sucuudiga.
Previous articleRa’iisal Wasaaraha Itoobiya Oo Hanjabaaddii Ugu Cuslayd U Diray Kooxaha Ku Kacsan Xukuumaddiisa
Next articleWiil Dhallinyaro Ah Oo Isku Gubay Markii Ay Ciidamada Dalkiisu Waydiiyeen Laaluush Uu Bixiyo